Paige Zandri's Articles na Martech Zone |
Edemede site na Paige Zandri
Paige Zandri, Attorney Network Director na Priori Iwu, na-ahụ maka ịmepụta netwọọdụ ọka iwu na mpaghara ọrụ Priori ọ bụla. Paige bụ onye na-emebu ọkaiwu na NYC ma bụrụkwa onye isi oche nke Kọmitii Solo na Small Firm Practice na New York County Lawyer's Association. Paige gụsịrị akwụkwọ na Lawlọ Akwụkwọ Iwu Iwu nke Brooklyn ma bụrụ onye ọkpọ egwuregwu bọọlụ nke m na Mahadum nke Maryland, Baltimore County.
Dika ahia-na oru ndi ozo ndi ozo - dabere na teknụzụ, ichekwa ihe ọgụgụ isi aghọwo ihe kachasị mkpa maka ụlọ ọrụ ndị na-aga nke ọma. Ọ bụ ya mere ndị ahịa ọ bụla ga - eji ghọta ihe iwu gbasara ikike ọgụgụ isi. Kedu ihe onwunwe ọgụgụ isi? Usoro iwu nke America na-enye ụfọdụ ikike na nchebe maka ndị nwe ihe onwunwe. Ikike na nchedo ndị a ọbụna gafere ókèala anyị site na nkwekọrịta azụmahịa. Ihe omuma nwere ike ibu ihe obula nke uche